I-Penthouse Sylt - I-Airbnb
Sylt, Schleswig-Holstein, i-Germany
I-i-loft ephelele ibungazwe ngu-Maximilian
Ifulethi elihle eliyi-penthouse eline-terrace enkulu, isihlalo sasebhishi, indawo yokubhukuda ne-sauna. Kungcono ngisho nesimo sezulu esibi.
ungaqasha i-penthouse enhle lapha. Inekamelo lokuphumula elinekamelo elilodwa elinemibhede emibili yekhabethe, usofa, isihlalo, i-Wi-Fi nomabonakude enesidlali se-DVD, esingadlulela embhedeni, ukuze ubukeke kahle embhedeni.
Ikhishi linesiqandisi *** i-icebox, isitofu, i-microwave enomsebenzi wokugaya inyama futhi okubaluleke kakhulu: umshini wokugeza izitsha. Ngaphezu kokujwayelekile, uzothola nomshini wokomisa izinwele egumbini lokugezela.
Into engcono kakhulu ngefulethi lonke, nokho, yithala elikhulu elihle lophahla. Lokhu kubheke eningizimu futhi kuhlomele, phakathi kwezinye izinto, isihlalo sasebhishi esinobubanzi obubanzi nokushona kwelanga. Muva nje, kukhona ne-grill yegesi ethala, engasetshenziswa futhi eyenza ithala neholidi libe lihle nakakhulu.
Endlini kunendawo yokubhukuda enesistimu ephikisanayo ne-sauna, ukuze iholide lijabulele ukuphumula ngisho nesimo sezulu esibi. Ngeshwa, noma kunjalo, i-sauna okwamanje ayisebenziseki ngenxa yesimo se-coronavirus.
Ekugcineni, indlu isenalo ikheshi, ikamelo lokuhlanza izingubo elinomshini wokuwasha nomshini wokomisa futhi ifulethi linendawo yokupaka.
Kusuka efulethini, kokubili isiteshi sesitimela kanye nemayela ekhulayo kuqhele ngebanga lezinyawo. Ibhishi liphakathi kwebanga lokuhanjwa ngezinyawo emizuzwini engu-8.
Hlola ezinye izinketho ezise- Sylt namaphethelo